Xubno sare oo Al-Shabaab looga dilay howlgallo ka dhacay Koonfurta Soomaaliya | Keydmedia
Xubno sare oo Al-Shabaab looga dilay howlgallo ka dhacay Koonfurta Soomaaliya
AMISOM ayaa ka caawisay dowladda inay ka saarto Kooxda Al-Shabaab Muqdisho iyo magaalooyin kale oo muhiim ah, balse wali amniga dalka laguma guuleysan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa maamulka Koonfur-Galbeed ayaa dilay toddobo dagaalyahanno oo ka tirsan Al-shabaab, shan kalena dhaawacay Sabtidii shalay kadib howlgal ka dhacay degaanka Bardaale ee gobolka Baay.
Maxamed Isaaq, gudoomiyaha Bardaale, ayaa u sheegay Keydmedia Online in ay howlgalka wadajirka ah ay qaadeen kadib markii Ciidanku heleen xog sirdoon, oo ku saabsan in xagjiriintu ku dhuumaaleysanaya aagga degaankaasi, kuwaasoo qorsheynayay weerarro argagaxiso.
"Iska-horimaad aad u culus ayaa dhex maray Ciidamada iyo xagjiriinta magaalada Bardaale, laakiin Ciidamadeennu waxay ka hortageen xagjiriinta, iyagoo dilay toddobo kamida oo uu ku jiro hoggaamiye sare oo mas'uul ka ahaa dhaqaalaha Al-Shabaab, waxaana sidoo kale dhaawacnay shan kale," ayuu yiri Isaaq.
Wuxuu xusay in askari ka tirsan Ciidamada dowladda uu dhintay seddex kalena ay dhaawacmeen intii uu socday iskahor-imaadka.
Howlgalka Shabeellaha Hoose
Howlgal kale oo Ciidamada dowladda ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose ayay ku dileen shan ka tirsan dagaalyahannada Al-Shabaab oo ay ku jiraan laba hoggaamiye oo kale howlgal kale oo ka dhacay magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamada ayaa qabsadey dhul ay ku sugnaayeen Al-shabaab oo ku yaalla degmada Mubarak ee Awdhagle ee koonfurta gobolka. Militeriga ayaa warbixin uu soo saaray maanta oo Axad ku sheegay in degaanada la qabtay intii lagu guda jiray hawlgalka, oo lagu xoreynayo meelaha ay wali ku sugan yihiin xoogaga Al-Shabaab.
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya [AMISOM] ayaa ka gacan siiyay Ciidanka DF in ay Al-shabaab ka saaraan Muqdisho bishii Agoosto 2011, laakiin xagjiriintu waxay wali ku ku sugan yihiin dhulka miyiga ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyagoo weeraro gaadmo ah ku qaada degmooyinkii laga saaray.